Loza an-dranomasina: mpandeha 5 maty navadiky ny lakana | NewsMada
Loza an-dranomasina: mpandeha 5 maty navadiky ny lakana
Par Taratra sur 01/09/2018
Tra-doza noho ny fisamboaravoaran’ny onjan-dranomasina, omaly maraina, ny lakana iray mampitohy an’Antsiraka, Soanierana Ivongo amin’ny Nosy Sainte-Marie. Vokany olona dimy tamin’ireo mpandeha 23 nentiny no namoy ny ainy.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomasina indray tany amin’ny fokontany Antsiraka kaominina Antanifotsy, distrikan’I Soanierana-Ivongo, omaly tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina. Lakana mpanao fitaterana mampitohy Antsiraka amin’ny fokontany Loukintsy Sainte-Marie ity niharan-boina ity ary saika fianankaviana iray hamonjy lanonana Tsaboraha ao Agnalarady nosy Ste Marie, androany asabotsy 1 Septambra avokoa ireto traboina ireto.
Raha ny angom-baovao avy any an-toerana, miisa 23 ireo mpandeha raha roa kosa ny mpanamory. Marihina fa lakana vita amin’ny hazo mirefy valo metatra ny halavany ary roa metatra ny sakany ary mandeha maotera. Vao niala 1 kilometatra fotsiny ny tora-pasika
Antsiraka, nisy onjan-dranomasina be ka nisy tamin’ireo mpandeha no raiki-tahotra sy nikoropaka tao an-dakana. Noho izay fihetsikin’ny mpandeha nikoropaka izay no nampihemotra ny mpanamory fa nihoatra ny fetra tokony hoentiny ny olona tao anatiny. Nanapa-kevitra ny hiverin-dalana hamonjy ny tora-pasika Antsiraka izy ireo ka tamin’izany no nisy onja somary avoavo indray. Nosedrain’ ilay lankana izany ary niaraka nikoropaka ireo mpandeha maro ka teo nisy olona dimy latsaka tany anaty ranomasina.
Niezaka ny nanatitra haingana ny 18 sisa tao an-dakana teny amorondrano aloha ny mpanamory vao niverina namonjy ireo latsaka anaty rano. Vokany, hita ny roa, raha mbola karohina kosa ny telo hafa.
Ity ranomasina any Soanierana Ivongo ity izay isehoana loza matetika. Mahery ny ranomasina, ary izay foana no nitera-doza, anisan’ny naha tra-doza ny minisitry ny mponina tamin’ny andron’ny tetezamita sy ny mpiara-miasa aminy. Misy fotoana tsy azo aleha io ranomasina io satria mahery be. Efa fantatry ny mpampiasa izany anefa matetika kanefa mbola misy tratra ihany.
Sajo s Yves S.